AHOANA NY FOMBA HAMORONANA DEMOTIVATORS AN-TSERASERA AMIN'NY LAHATSORATRA EO AMIN'NY SARY - ONLINE SERVICES - 2019
Tena Online services
Mamorona demotivator ety anaty aterineto
Amin'ny ankapobeny, ny mpandika teny dia sary iray voaforona amin'ny saha maizim-be, izay ahitana ny lohateny sy ny lahatsoratra fototra. Amin'ny ankapobeny, ny zavatra toy izany dia miala amin'ny natiora, fa indraindray dia misy ihany koa ny entana semantic.
Toerana hamoronana demotivator
Amin'ny fampiasana ny serivisy an-tserasera voatanisa ao amin'ny lahatsoratra, dia mamonjy ny tenanao ianao tsy handany fotoana ny fametrahana rindrambaiko. Na dia mamaha olana maro aza, ny mpamoaka sary mpanazatra dia mitaky fahalalana manokana, ary mampiasa ny iray amin'ireo toerana etsy ambany, dia azo antoka fa hahazo vokatra tsara ianao.
Fomba 1: Demotivators
Iray amin'ireo toerana tsara indrindra amin'ity sehatra ity. Ny tsy fahampian-tsakafo tokana dia azo raisina ho dokambarotra kely momba ny demotivatora noforonina, na dia tsy mitongilana aza izany.
Mandehana any amin'ny Demotivators
Kitiho ny singa "Te-hampakatra sary avy amin'ny ordinaterako aho" ao amin'ny pejy voalohan'ny tranonkala.
Avy eo amin'ny bokotra "Fidio ny rakitra".
Fanteno ny sary hanatsarana sy hanamafisana ity fihetsika ity amin'ny alàlan'ny fanindriana "Open".
Tsindrio "Continue" ao amin'ny zoro ambany ambany amin'ny pejy.
Fenoy ny saha "Lohateny" ary "Text" lahatsoratra tianao ary mifidiana "Preview".
Hipoitra ny varavarankely iray, izay hijery toy izao:
Raha te-haka ny demotivatora vita amin'ny solosaina ianao dia tsindrio ny bokotra. "Download".
Fomba 2: Mpanafika
Ny hany atolotra amin'ny serivisy an-tserasera dia manome fahafahana anao handrindra izany amin'ny famoronana demotivator. Manome fomba tsotra fanaovana sary toy izany raha tsy misy dokam-barotra na sivana.
Mandehana any amin'ny Demconstructor
Rehefa nifindra tao amin'ny pejin-tranonkalan'ny Demconstructor dia tsindrio "Review ...".
Fanteno ny antontan-drakitra ilaina eo anivon'ireo rakitra solosaina ary manamarina ny fisafidianana amin'ny tsindrio "Open" ao amin'ny varavarankely iray ihany.
Azonao atao ihany koa ny manindry ny lohatenin'ny lahatsoratra sy ny loharanon-dahatsoratra, ka manova ny ao anatiny.
Ampidiro ny habeny ny sary vokarina eo amin'ny sehatra mifanaraka amin'izany, ary alaina maimbo ny rakitra vita amin'ny solosainao "Download".
Fomba 3: IMGOnline
Ny IMGOnline dia manana ambaratonga maro ho an'ny fanodinana JPEG-sary. Anisan'izy ireo ny fitaovana hamoronana demotivators tsy misy dokam-barotra ary amin'ny fahafahana manova ny endriky ny votoatin'ny lahatsoratra.
Mandehana any amin'ny service IMGOnline
Ao amin'ny rindran-tsarin'ilay sary vaovao, tsindrio ny bokotra. "Fidio ny rakitra".
Ataovy azo antoka fa napetraka ny tsongo ao amin'ny paragrafy faharoa "Demotivators".
Fenoy ny saha tsirairay "Lohateny, teny faneva" ary 'Fanazavana". Ao amin'ny andalana faharoa dia tsy maintsy miditra ny lahatsoratra fototra amin'ny sary.
Ampifanaraho ny mari-pahaizana amin'ny mari-tsindrim-peo eo amin'ny sary eo amin'ny 0 hatramin'ny 100.
Mba hanamafisana ny safidinao, tsindrio ny bokotra. "OK" amin'ny faran'ny pejy.
Hisafidy singa "Download sary namboarina". Ny fanontana dia hanomboka amin'ny alalan'ny tranokala Internet.
Fomba 4: Demotivatorium
Ny fomba tsotra indrindra hamahana ny olana. Ankoatra izany, manana fitaovana izy hamoronana motiviteurs, mpampianatra fitiavana, mpanolotra hevitra. Ny fitaovana noforonina dia azo alefa ao amin'ny serivisy famakiam-boky.
Mandehana any amin'ny Demotivatorium fanompoana
Hanomboka hiasa miaraka amin'ny Demotivatorium isika dia manosika ilay bokotra. "Fidio ny rakitra".
Fanteno ny sarin'ny fototra ary tsindrio "Open".
Kitiho ny singa "Mamorona demotivator" ao amin'ny tontonana mifanaraka aminy.
Mameno ny tsipika "Lohateny" ary "Subtitle" ny votoatin'ny lahatsoratra.
Hamita ny asa amin'ny demotivator amin'ny alàlan'ny fisitrihana "Continue".
Afeno ny sary amin'ny alàlan'ny navigateur amin'ny Internet amin'ny fipihana ny bokotra. "Download".
Fomba 5: Photoprikol
Ao amin'io tranokala io dia tsy afaka mamorona afa-tsy demotivatora malaza, fa mampihatra ny vokany avy amin'ny fanangonana manokana ihany koa. Ny Photoprinting dia manana tranomboky malalaka amin'ny fialam-boly sy ny lahatsary.
Mandehana any amin'ny Photoprikol
Atombohy amin'ny fampiasana ilay tranonkala amin'ny alàlan'ny fanindriana "Fidio ny rakitra" amin'ny pejy voalohany.
Hahita ny sary ilainao, mifidiana izany, tsindrio "Open".
Fenoy ny saha "Soratra ambony" ary "Soratra ambany". Ao amin'ny tranonkala natao manokana hamoronana demotivators, ity no lohatenin'ny lahatsoratra sy lahatsoratra fototra.
Raha vantany vao vita ny andalana voafaritra dia tsindrio "Mamorona Demotivato".
Ampidino ny rakitra amin'ny solosainao amin'ny alalan'ny bokotra "Download demotivator noforonina".
Fomba 6: Rusdemotivator
Mamoròna ireo demotivateur tsara indrindra, ambarao ao amin'ny tranokala, zarao amin'ny namana ary ataovy bebe kokoa. Tena mora ampiasaina, fa indrisy, mametraka zana-tohatra kely kely eo amin'ny zoro havanana amin'ny sary ahafahana mandefa azy.
Mandehana any amin'ny Rusdemotivator
Tahaka ny ankamaroan'ireo tolotra ireo dia manomboka amin'ny bokotra. "Select image".
Ao amin'ny varavarankely misokatra, mifidiana ny rakitra hanovana ary tsindrio "Open".
Ampidiro eo amin'ny saha ny lahatsoratra "Lohateny" ary "Signature".
Arovy ny fivoaranao amin'ny bokotra mety.
Tsindrio havanana amin'ny sary, miantsoa ny menu context, ary mifidiana ny singa "Vonjeo ny sary tahaka ny".
Ampidiro ny anaran'ny rakitra ary tsindrio "Save" ao amin'ny varavarankely iray ihany.
Tsy misy sarotra amin'ny famoronana demotivateur an-tserasera. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, mila mampakatra sary ianao raha te-hanamboatra, mameno andalana roa miaraka amin'ny votoatin'ny lahatsoratra ary mamonjy ny asa amin'ny solosaina. Ny tranonkala sasany dia mbola manana ny trano fialantsiny manokana, izay, raha ny tena izy, dia mety hiandry miaraka amin'ireo tsy manam-paharetana ireo demotivatoranao.
https://termotools.com mg.termotools.com © Online services 2019